ग्राहक समीक्षा | वूपशप समीक्षाहरू
125824 समीक्षाहरूमा आधारित
प्याचवर्क न्यानो हुडेड ऊन लूज पुरुषको स्वेटशर्ट
पार्सलको रसिदमा9यूरोको अतिरिक्त लागतको बावजुद मेरो खरीदसँग सुपर मीठो धेरै खुसी छ
ब्यान्डेज टर्न-डाउन कलर फ्लोरल प्रिन्टेड लामो बाहुला महिला ब्लाउज
यो सुन्दर छ
सा म plait बिएन, दयालु woopshop!
वर्णनको रूपमा, धन्यबाद
sweatshirt राम्रो छ, आकार मेरो लागी एकदम सही छ।
पोर्टेबल युनिभर्सल4USB फ्रन्ट र ब्याक USB QC3.0 कार द्रुत चार्जर
कमे ला विवरण, आदर्श!
स्वेटशर्ट साँच्चै मन पर्यो, बाक्लो, न्यानो र स्पर्शको लागि रमाईलो, म यस विक्रेताबाट थप लिनेछु!
जुत्ता मात्र भव्य छन्! सुन्दर, आरामदायी इनसोल, मोजाहरूमा धेरै सहज। यसको 37,5 साइजमा, साँघुरो स्टप, 38-सही अर्डर गरियो!
बेल्टको साथ क्लासिक डबल-ब्रेस्टेड लामो ट्रेन्च कोट
राम्रो गुणस्तरीय रेनकोट। उचाइमा 175 आस्तीनहरू धेरै छोटो छन्
जुत्ता न्यानो छ। माथिल्लो तलामा थोरै टुक्रा टुक्रा, तर सामान्यतया तिनीहरूको पैसाको लागि धेरै योग्य। विक्रेताले चाँडै पठायो, तर डेलिभरी सेवाले दुई हप्ताको प्रतिज्ञाको सट्टा 1,5 महिना डेलिभर गर्यो।
युनिसेक्स पत्र मुद्रित हुडेड ऊन ओभरसाइज स्वेटशर्ट
सामग्री नरम तर शुद्ध कपास होइन, बरु मिश्रण। ट्यागहरू सामान्यतया।
खाडल भारी, धेरै घना, एक अस्तर संग, कपडा, वर्षामा भिजेको हुनेछ, तर हावाबाट बचाउनेछ। तपाईं यसलाई गहिरो शरद ऋतु सम्म लगाउन सक्नुहुन्छ। पसल रमाईलो छ, उपहारको रूपमा अर्को सुन्दर रबर राखियो, उहाँलाई धन्यवाद
ग्राहकहरूले हामीलाई 4.9 /5दर गर्दछ 125824 समीक्षाहरूको आधारमा।